ကိုပါကြီး၏ အလောင်းသယ်ယူခွင့်မပြုသော လူမိုက်များနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့နေပြီ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« House of Cards original British series : A Nasty Prime Minister 1-12
SHAME ON YOU DASSK and NLD for giving this IDIOT BIGOT to be your spokesperson »
ကိုပါကြီး၏ အလောင်းသယ်ယူခွင့်မပြုသော လူမိုက်များနှင့် ထိပ်တိုက်တွေ့နေပြီ
သတင်းထူးပြီဗျို့
(၁) ခန္ဓာ အလယ်ပိုင်းမှ အထက် ဦးခေါင်းပိုင်းထိ ပြင်းထန်သော ဒဏ်ရာများရ၇ှိ
(၂) ဦးခေါင်းပိုင်း၏ ဘယ်ဘက် တခြင်း နှိပ့်ဝင်အောင် ပေါင် ၂၀ မျှ လေးသော အရာဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် အဖန်ဖန်၇ိုက်နက်မှုရှိ
(၃) ရှေ့ဘက် နှာခေါင်း၇ိုး ချိုင့်ဝင် နိမ့်ကျနေပြီး အတွင်းခံ နာဆစ်ရိုး တခုခြင်းကွဲထွက်ခြင်းသည် ပြင်းထန်သော နံပါတ်လက်ကိုင်ဒုတ်ဖြင့် သို့မဟုတ် သေနတ်တခုခု၏ အောက်ခြေ ဒင်ရိုးဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ထုထောင်းရိုက်နက်ခံရမှု၇ိုက်
(၄) လယ်ပင်းညှပ်ရိုးးတချောင်းကျိုးနေရခြင်းမှာ ရှေ့မှပင် လေပင်သော အရာဖြင့် နည်းဆုံး ၅ ကြိမ် မက ရိုက်နှက်ပုံရှိ
(၅) ၀မ်းဗိုက်နောက်ဘက် နံရိုးတစ်ချောင်းကျိုး၍ အခြားတချောင်းမှာ ၀မ်းဗိုက်အတွင်းသားဘက်သို့ ထိုးစိုက်ဝင်ခြင်း ရှိ
(၆) နောက်ကျောဆစ်ရိုး လေးခု ကွာဟ ပြုတ်ထွက်နေကြောင်း တွေ့ရှိရ
(၇) ဘယ်ချေထောက် ညိုဒကြီး အပေါ်ပိုင်း ဒုးအောက်တည့်တည့်တွင် အ၇ိုးအက်ကွဲနေကြောင်းတွေ့ရ
(၉) ညာဘက် နံရိုးသုံးချောင် ညီညာစွာ အနိမ့်အမြင့် မတူညီကြောင်းတွေ့ရ
(၁၀) ဦးခေါင်းခွံအရှေ့ပိုင်းတွင် အပေါက်ငယ်သုံးပေါက်တွေ ကျည်ဆံရာမဟုတ် ချွန်ထက်သော အရာ တခုခုဖြင့် အကြိမ်ကြိမ် ထိုးခြင်းဖြစ်
(၁၁) ၀မ်းဗိုက်၏ ချက်အထက်ပိုင်တွင် အပေါက်ငယ်နှစ်ခု၇ှိ ပြီး နောက်ကျောဘက်သို့ ပေါက်ထွက်ခြင်းမ၇ှိခြင်းမှာ ဦးခေါင်းတွင် သုံးခဲ့သော ချွန်ထက်သည့် အရာကိုပင် ၀မ်းဗိုက်တွင် ပြန်လည်အသုံးပြုကြောင်း ဖြစ်နိုင်…………
သို့သော် အဆိုပါ စစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်များအား စစ်ဆေးသော ဆရာဝန်ကြီးမှ လက်မှတ်မထိုးပေး၇ဲကြောင်း အတိလင်း ပြောပါသည်။
၀မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းတာကတော့ ကိုပါကြီးအလောင်းကို မှုခင်း၇ဲတပ်ဖွဲ့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်တို့က ရန်ကုန်သို့ ပြန်လည်သယ်ယူနိုင်ခွင့် ပြုပါသော်လည်း မော်လမြိုင်မြို့ ဆေးရုံဝန်းကျင်တွင် ရုတ်တရက် တဖွဲဖွဲ ရောက်၇ှိလာနေကြသော မျက်နှာစိမ်းလူမိုက်နှင့် ညတွင်းချင်းပင် ဦးဆံရိပ်၍ သင်္ဃန်း ပတ်လာပုံရ၇ှိသော သံဃာအချို့မှ မဘသ တံဆိပ်ယပ်တောင်ကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ကိုပါကြီး အလောင်းကို သယ်ယူခွင့် နယ်မြေ ဖြတ်ကျော် ကူးသန်းခွင့် အား မွန်တို့၏ ဓလေ့အရ ခွင့်မပြုနိုင်ကြောင်းနှင့် အချို့မှာ မော်လမြိုင်မြို့ ဆေးရုံ၏ ရှေ့တည့်တည့်မှာပင် ဒုတ်ဓားကိုင်ဆောင်၍ တားဆီးပိတ်ပင်မှုများ ပြုလုပ်ထားကြောင်းကို အာဏာပိုင်များမှ ၀င်ရောက် ဖျန်ဖြေပေးခြင်းမရှိပဲ ရုတ်သဲသဲဖြစ်နေပါသည်။ ကိုနေမျိုးဇင်မှ ကြိုးပမ်းညှိနိုင်းနေသည်ကို မြင်ရပါသည်။
သတင်းထူး ဆက်တိုက် စောင့်ကြည့်လျက်ပါ
This entry was posted on November 6, 2014 at 4:52 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.